Fampidirana ny matematika, ny fomba tsara indrindra hanombohan'ny zanakao amin'ny isa | Vaovao IPhone
Raha nahita ny fanambaràna vaovao momba ny iPad 2 any Espana ianao dia afaka mahita ny fampiharana ao anatiny ianao mandritra ny fotoana fohy Fampidirana ny matematika, fomba tsara sy détactika hanombohana ny kely eo amin'ny tontolon'ny isa manodidina antsika.
Ny fampiharana dia novolavolain'ny ekipa mpampianatra Montessori sy vondrona ray aman-dreny izay nahita tamin'ity fomba fampianarana ity fomba iray lavorary ianaran'ny ankizy:
Ny fototra fototry ny matematika
Raha te hamaky, manoratra sy mahatakatra ny isa avy amin'ny 0 ka hatramin'ny 9
Ny mariky ny isa sy ny tariny
Fifandraisana, filaminana ary fifandraisana eo amin'ny habakabaka
Fampidirana isa hafahafa sy isa mihitsy aza
Fahaiza-manao maotera tsara
Mba hahatratrarana izany rehetra izany, Fampidirana ny matematika dia manana hetsika maro izay ifandraisan'ny ankizy amin'ny iPad sy ny efijery capacitive. Aorian'ny fitsambikinana dia nohazavainao tamin'ny antsipirihany ny sasany amin'ireo fanazaran-tena ireo:
VATO mena : Ity hetsika mahafinaritra ity dia manambatra feo mahafinaritra miaraka amina hetsika mampihetsi-po mahafinaritra ary manampy ny zanakao hihaitra ny fahatsapany fanavakavahana amin'ny fahitana. Ny tanjon'ity hetsika ity dia ny hampivelaran'ny zanakao fahatakarana ny halavany amin'ny alàlan'ny fandaminana ireo bara mena hatramin'ny lava ka hatramin'ny fohy indrindra. Aza gaga raha mahita fomba vaovao hisainana olana taloha ny zanakao.
VATO NISA : Ireo bara isa dia mampiditra ny hevitra momba ny habetsahan'ny isa tsirairay. Ny zanakao dia tsy hampitovy ny feon'ny tarehimarika amin'ny bara isa fotsiny fa ho fantany koa ny anaran'ny isa. Ny làlana mankamin'ny iray tapitrisa, mazava ho azy, dia manomboka amin'ny iray.
Isa isa miaraka amin'ny SANDBOARD : Miaraka amin'ny fankasitrahana ny habetsaky ny isa tsirairay, ity hetsika ity dia miroso mankany amin'ny fampisehoana ireo tandindony. Betsaka ny ankizy no efa mahay manisa, fa te hahay manoratra isa koa. Amin'ity hetsika ity dia ampiasaina ny feon-kazo Montessori malaza, miaraka amin'ny fampisehoana sary miavaka, hitarihana ny zanakao hamantatra ny isa. Hisy tontolo vaovao hisokatra eo imasonao. Ny kinova ho an'ny iPhone sy iPod mikasika dia mampiditra hovitrovitra ihany koa, mba hampahatsiahivana moramora ny zanakao fa efa nivoaka ny faritry ny soritry izy ireo.
VATO SY KARAZANA: Ny tanjon'ireo bara sy karatra isa dia ny famenoana ny tsingerina manomboka amin'ireo marika isa ka hatramin'ny isan'izy ireo. Mametraka isa omena eo amin'ny bara mifandraika ny zanakao. Izany dia miantoka ny fahazoan'ny zanakao ny marika sy ny filaharan'ny isa tsirairay. Izy io koa dia fanomanana mivantana ny fanampiana, ny famoahana, ny fampitomboana ary ny fizarazarana.
NOMBE SY KAONTERA: Amin'ity hetsika ity dia mihamatanjaka ny fahazoan'ny zanakao isa momba ny isa amin'ny alàlan'ny fiasa amin'ny isa hafahafa sy mahazatra. Ny fampiharana dia manamafy ny fahatakarana ny filaharan'ny isa. Ny isa sy ny kaontera dia manamafy sy manamarina ny fahaizan'ny matematika nianaran'ny zanakao hatramin'io fotoana io, nefa tsy tsikaritry ny zanakao.
Fampidirana ny matematika dia fampiharana manerantany izay tsy azo adino raha misy ankizy kely ao an-trano manomboka amin'ny tontolon'ny fampianarana:
Fampidirana ny matematikamaimaim-poana
Fampiharana Montessorium hafa:
Ao amin'ny App Store dia misy ihany koa fampiharana roa hafa mifandraika amin'ny fomba fianarana Montessori. Ny iray amin'izy ireo dia misy ifandraisany amin'ny Fampidirana ny tontolon'ny taratasy. Ny lafy ratsy dia amin'ny teny anglisy ihany ny fampiharana, na dia amin'ny fandefasana farany aza dia hadika amin'ny teny Espaniôla.
Fampidirana ny taratasymaimaim-poana
Mpanoratra Alpha io koa dia fomba mahafinaritra hafa mampifandray ny teny amin'ny zavatra sy loko. Ny fampiharana dia amin'ny teny Anglisy indray na dia manantena izahay fa ho voadika amin'ny teny Espaniôla izany satria nitranga tamin'ny Fampidirana ny Matematika:
Montessorium: fanombohana ny tenymaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fampidirana ny matematika, ny fomba tsara indrindra hanombohan'ny zanakao amin'ny isa
Juaco dia hoy izy:
Fa maninona no lafo kokoa ny fampiharana maimaim-poana noho ny lalao? Ataoko fa ny mifanohitra amin'izay no tokony ho izy.
Valiny amin'i Juaco